Horseed oo guul weyn ka gaartay Kooxda Gaadiidka kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League… +SAWIRRO – Gool FM
(Muqdisho) 07 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa guul weyn ka gaartay naadiga Gaadiidka kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-0, ciyaar aad u xiiso badan oo galabta ka dhacay Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mugadishu.
Daqiiqadii 18-aad kooxda kubadda cagta Horseed ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay ciyaaryahanka Lambarka 22-aad ee Joshua Abdul, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Farxaan xidig.
34 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Horseed ayaa dhalisay goolkeeda labaad, waxaana 2-0 ka dhigay Nuur Cumar, waxaana markale caawinta goolkan lahaa Farxaan xidig.
Daqiiqadii 65-aad kooxda Horseed ayaa sii dheereysatay hoggaaminta dheesha kaddib markii uu 3-0 ka dhigay xiddiga Lambarka 28-aad Ibraahim, iyadoo uu markale caawiyay Farxaan xidig.
68 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Horseed oo sii wadata bandhigeeda goolasha ee kulankan ayaa dhalisay goolkeeda Afaraad kaddib markii uu 4-0 ka dhigay Farxaan maxamed axmed Xidig oo caawin ay kaga timid Ibraahim Ilyaas.
Daqiiqadii 93-aad Bile Muxudiin Buraale ayaa soo xiray bandhiga goolasha ee kulankan, wuxuuna dheesha ka dhigay 5-0 ay ku hoggaamineyay kooxda Horseed.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 5-0 ay kaga adkaatay Horseed kooxda Gaadiidka, kaddib ciyaar aad u xiiso badan oo galabta ka dhacay Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mugadishu.